(कीर्तिपुरको शिक्षित एवं जागरुक व्यक्तित्वको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल समाजसेवी टीकाराम महर्जनसंगको भलाकुसारीको आधारमा तयार पारिएको सामाग्री यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।)
त्यतिबेला अहिलेजस्तो स्कुलहरु थिएन । शिक्षाको महत्व बुझ्नु भएका उहाँका बुबाले उहाँलाई प्राथमिक शिक्षा भाषा पाठशालामा पढाउनु भयो । पछि पाँगाको जलविनायक आधार हाई स्कुलमा पढ्न जानुभयो । त्यस स्कुलमा कक्षा ८ सम्म पढाई हुन्थ्यो । त्यहाँबाट उहाँले कक्षा ८ पास गर्नु भयो । त्यतिबेला कक्षा ८ पास भएकालाई जागिर खान एस.एल.सी.को मान्यता दिन्थ्यो । इन्टरमिडियट पढ्नको लागि भने अंग्रेजी एक विषयमा एस.एल.सी.पास गर्नु पथ्र्यो । उहाँले २०१३ सालमा एस.एल.सी. परीक्षा दिएर पास गर्नुभयो । उहाँले आई.एड. ताहाचल कलेजबाट पास गर्नुभयो ।
वि.सं.२०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । उहाँ पनि आन्दोलनमा सक्रिय रुपले लाग्नु भयो । त्यतिबेला कीर्तिपुरको चिठू विहार गा.वि.स.को प्रधानपंच उहाँ, लायकूको रुद्रबहादुर प्रधान, पालिफलको अमर श्रेष्ठ, बाहिरीगांवको शम्भुराम महर्जन, विष्णुदेवी गा.वि.स.पाँगाको प्रधानपंच रमेश मान महर्जन, बालकुमारीको मदन महर्जन र चोभार भूतखेलको प्रधानपंच शिशिर धिताल हुनुहुन्थ्यो । जनआन्दोलनको समर्थनमा सातै जना प्रधानपंचहरुले बाघभैरवस्थानमा सभा गरेर सामुहिक राजिनामा दिनुभयो ।
पहिलेको कम्यूनिस्ट पार्टी र अहिलेको कम्यूनिस्ट पार्टीमा के फरक पाउनु भएको छ ?
—सुरुमा त हामी पनि त्रि.वि.कीर्तिपुरमा राख्न हुँदैन भन्ने पक्षमा थियौं । थुप्रै नारा जुलुस भयो । प्रहरीसँग महिलाहरुले समेत मुठभेड गरे । जसरी गरे पनि त्रि.वि.कीर्तिपुरमै राख्ने भयो । अब लडेर हामी जित्न सक्दैनौं भन्ने लाग्यो । त्यतिबेला अलि पढेलेखेका युवाहरुले कीर्तिपुरको सामाजिक, आर्थिक विकासको लागि युवक संघ गठन गरेका थियौं । जसको अध्यक्ष चन्द्रमान नकःमि हुनुहुन्थ्यो । अब हामीले लडेर जित्न सक्दैनौं बरु त्यहाँबाट जे जति फाइदा लिन सकिन्छ लिउँ भनेर प्रस्ताव लिएर गयौं । कुराकानीको क्रममा सरकारले कीर्तिपुरको एक रोपनीको बदला चितवनमा ३ बिघा जमिन दिने, जंगल फडानीको लागि तिन सय रुपैया पनि दिने भनेका थिए । त्रि.वि.को भवन बनाउँदा कीर्तिपुरवासीलाई नै काम दिने । अफिस खुलेपछि कीर्तिपुरवासीलाई योग्यता अनुसार जागिर दिने सरकारले वचन दिएका थिए । तर हामीले यो कुरा जनतालाई बुझाउनै दिएन । आन्दोलनकारीको नेतृत्व बासुपासाले गरेका थिए । हाम्रो मांग विथोल्न उहाँले हामीलाई यःसंघ भनेर विपक्षी पार्टी बनाईदियो । उसको लहैलहैमा लागेर कीर्तिपुरवासी हाम्रो विपक्षमा उत्रियो । हामीले बाध्य भएर चुप लाग्नु प¥यो । कीर्तिपुरवासीलाई विभाजित बनाएर कमजोर बनाईसके पछि बासु पासा सरकारी पक्षमा लाग्यो । कीर्तिपुरवासी हे¥याहेरै भयो । उसले सहायक अंचलाधिशसम्म पडकायो । कीर्तिपुर नै छाडेर गयो । हाम्रो मांगको लिखित दस्तावेज बनाउन सकेनौं । त्यसैले हामी पिडितको पिडितै भयौं ।
त्रि.वि. कीर्तिपुरमा राखेर कीर्तिपुरवासीलाई फाइदा भयो भनिन्छ नि । तपाईंको के धारणा छ ?
—त्रि.वि.कीर्तिपुरमा राख्नु हाम्रो लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ । त्रि.वि.कै कारण हामी विकासमा पछि परेका छौं । त्रि.वि.ले गर्दा कीर्तिपुरवासीलाई हरेक किसिमले कमजोर बनाई दियो । त्यतिबेला मुख्य पेशानै खेती किसानी थियो । खेत नभएपछि काम भएन । त्रि.वि.बाट मुआब्जा पाएपछि कीर्तिपुरमा भट्टी पसलहरु धमाधम खुल्न थाले । मुआब्जाबाट पाएको पैसाले जाँड रक्सी पिउने, तास खेल्ने चलन बढेर गयो । मानिसहरुमा काम गर्ने इच्छा कम हुँदै गयो । मानिसहरुलाई अल्छि बनायो । अहिले पनि त्रि.वि.मा कीर्तिपुरका कति मान्छेले रोजगारी पाएका छन ? कौडीको भाउमा हाम्रो जमिन लिएर त्रि.वि.ले अरुहरुलाई जग्गा भाडामा दिएर कमाई रहेको कुरा नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ । त्रि.वि.कै कारण हामीकहाँ कुनै पनि ठूला उद्योग खुलेन । त्रि.वि.कै कारण रिंगरोडले कीर्तिपुर छोएन । पहिले गाउँ भनिने गोंंगबुँ, बानेश्वर, ज्ञानेश्वर अहिले कति विकास भैसक्यो ? त्यसको दाँजोमा हामी कता छौं ?
हाम्रो समाजको पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के फरक पाउनुभयो ? अथवा हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ ?
Posted by Jwojalapaweekly@gmail.com at 7:15 PM